A gwara Ndị America Kpachara Iwu na Ha Ga-eyi Ihu Masks N'ụlọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » A gwara Ndị America Kpachara Iwu na Ha Ga-eyi Ihu Masks N'ụlọ
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
CDC ịjụ ndị America ọgwụ mgbochi zuru oke ka ha kpuchie ihu n'ime ụlọ
Enwere ike itinye ntuziaka masking naanị na mpaghara ụfọdụ nwere nnukwu nsogbu Covid-19, ma ọ bụ ụfọdụ mmadụ.
Ọnọdụ ọhụụ kwa ụbọchị nke COVID-19 amụbaala okpukpu anọ na US kemgbe June.
Ọdịdị Delta na -ebufefe efefe nke coronavirus na -ebute ọbụna ọgwụ mgbochi.
Mkpebi CDC anọwo na -arụ ọrụ ruo ọtụtụ ụbọchị.
Ọnwa abụọ gara aga, ndị Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US (CDC) kpochapụrụ ndị America ọgwụ mgbochi zuru oke ịlaghachi n'ime ime ụlọ dịka ụlọ nri, ụlọ ihe nkiri, ụlọ ahịa na oghere ọrụ na -enweghị nkpuchi. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ adịla njikere ịla azụ ma dụọ ụfọdụ ndị nwere ọgwụ mgbochi ka ha yikwasị mkpuchi ihu na ụfọdụ ntọala ime ụlọ.
Mkpebi a, nke emere n'oge ịwa ahụ na ikpe COVID-19, ga-agbagha nduzi mbụ nke nzukọ a, mgbe ekwuputara.
Site na ụdị Delta na -ebufefe efefe nke coronavirus na -efe efe ọbụna ọgwụ mgbochi, yana ikpe na -ebili na mpaghara nwere ọnụego inoculation dị ala, a na -atụ anya CDC ịrịọ ma ndị ọgwụ mgbochi na ndị na -agbabeghị ọgwụ ka ha kpuchie ihu mgbe ha na -eri nri n'ime ụlọ ma ọ bụ na -abanye oghere ndị ọzọ.
Ọ ga -abụ na a ga -ekwuputa ntuziaka CDC ma emechaa n'ehihie Tuzdee, mana nkọwa ya ka edoghị anya. Enwere ike itinye ntuziaka masking naanị na mpaghara ụfọdụ nwere nnukwu nsogbu Covid-19, ma ọ bụ ụfọdụ mmadụ. Dị ka ụfọdụ akụkọ si kwuo, na -ehota isi mmalite nke White House, na a ga -agwa ndị bi na ụmụaka a na -agbanyeghị ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ndị nwere ọrịa mgbochi ka ha kpuchie ihu na oghere ọha.
Mkpebi a adịla kemgbe ọtụtụ ụbọchị. Onye ndụmọdụ ahụike White House Dr. Anthony Fauci kwuru na Sọnde na CDC bụ "onye na -echebara echiche nke ọma" n'oge ahụ.
Okwu ikpe ọhụụ nke COVID-19 amụbaala okpukpu anọ na US kemgbe June, dị ka data sitere na CDC. N'ọtụtụ ikpe a na -akọ n'etiti ndị a na -agba ọgwụ mgbochi, ndị ọrụ gọọmentị na ndị na -akọwa mgbasa ozi etinyela ụta maka ndị na -ajụ ịgbapụ.
Fauci kwuru na Sọnde Sọnde, na -agbakwụnye na US na -agagharị ugbu a “n'ime ntụzịaka na-ezighi ezi ”n'ihe gbasara ịchụpụ COVID-19.
Dabere na CDC, ihe dị ka pasent 69 nke ndị okenye US anatala opekata mpe otu ọgwụ mgbochi coronavirus. Agbanyeghị, n'etiti ndị na -enwetabeghị mgbọ, ntuli aka ọhụrụ na -egosi na imirikiti enweghị ebumnuche ime ya.